Sanduuqa TV-yada Android 9.0, Pendoo TX6 Android TV Box 4Go DDR3 32Go EMMC Dual ... - VIDEO - TELES RELAY
ACCUEIL » VIDEOS »Android 9.0 TV Box, Pendoo TX6 Android TV Box 4Go DDR3 32Go EMMC Dual ... - VIDEO
9.0 TV Box, Pendoo XIDDIGA CODSIGA XIDHIIDA DDR6 TV 4Go EMMC Dual ... - VIDEO
dhimis Gaarka 9.0 Android TV Box Android TV Box Pendoo TX6 4 3 DDR32 Go Go EMMC Dual WiFi + 2.4G 5G BT5.0 Bawdada Core 3D 4K Ultra HD Android TV Box H.265 USB3.0 riix halkan https: //amzn.to/2XCFKqW
Badeecad aad u fiican. Waxaan ku badalayaa rokekeyga sanduuqan android waana runti waa mudan tahay
【CODKA 'ANDROID 9.0 SYSTEM' end Pendoo TX6 Android TV Box wuxuu la yimid cusboonaysiinta OS OS 9.0, wuxuu kor u qaadaa waxqabadka iyo u adeegsiga iyada oo loo marayo istiraatijiyad deggan oo xasilloon, oo aan xasilooneyn. La jaan qaadida barnaamijyadi ugu dambeeyay ee Android iyo barnaamijyada ayaa si habsami leh u qaboojiya. Sanduuqa tv-ga ee 'android' wuxuu sidoo kale bixiyaa fursado badan oo ku habboon oo macmiil ah iyo sifooyin si kor loogu qaado khibradda adeegsadaha.
ES DOUBLE WIFI DESIGN IYO ANTENNA】 TX6 waxay leedahay xirmo Dual 2.4G + 5G Dual WiFi xirmo iyo qaabeyn laba gees oo awood leh si ay u fahansiiso kor u qaadista seenyaalaha soo dhaweynta WiFi, isku xirnaanta WiFi iyo xasiloonida ka sarreysa. Bandhigyo lagu yareynaayo qaboojinta iyo dib u dhaca ciyaarta ee internetka iyo socodka joogtada ah ee fiidiyowga HD. Waad hagaajin kartaa xagasha dibedda Wi-Fi dibedda iyo si toos ahba si aad u heshid isku xirnaanshaha ugu habboon ee Wi-Fi.
NUM 3D 4K H.265 & VP9 DECODING】 Sanduuqa TV-ga ee Android wuxuu si buuxda u taageerayaa dib u soo celinta fiidiyowga 3D muuqaalka dhabta ah. TX6 HDR & HDMI 2.0 oo lagu dhex daray sanduuqa TV-ga ee android waxay ka baaraandegi karaan sawirrada si cad; H.265 HEVC iyo VP9 Technology Decode Technology waxay taageertaa xNUMXK x 4K qaraarka 2 galabkiiba. Sanduuqa TV-ga ee Android wuxuu bixiyaa xawaare aad u xawaare sarreeya iyo karti u sameynta sawir xirfadeed. Waxaad ku raaxeysan kartaa fiidiyaha ugu dambeeyay ee '60K HD' oo waxaad kumanaan kun oo ciyaar oo Android ah ku dhejin kartaa shaashadda weyn ee 4k.
DIIWAANKA FASALKA & XEERKA QALYAANKA】 TX6 Android Box wuxuu bixiyaa awood ballaaran oo ah 4 GB Ram, 32 GB ROMs iyo 64 procestors bit. Hawlgalkiisu waa dhakhso oo xasilloon, oo ka hortaga shilalka sababay xusuusta aan ku filnayn. Waxa kale oo aad ku dari kartaa waddo aad u adag, kaarka TF si aad u ballaadhiso kaydinta. Sanduuqa TV-ga ee Android oo ku qalabeysan 3.0 USB gudbinta ayaa 10 jeer ka dhakhso badan USB 2.0. Waxay ku wareejin kartaa feylasha waaweyn, fiidiyowyada qiimaha kaydinta ee lagu qeexay aaladda kaydinta, waxayna kor u qaadi kartaa mashiinka si loo yareeyo isticmaalka awoodda.
EST WANAAGSAN BILAASH AH IYO QIIMAYN KU QANACSAN QANACSAN qanacsanaanta macmiilku waa mid ka mid ah mudnaanahayaga ugu sarreeya. Weligaa ha ka walwalin dhibaatooyinka iibka kadib. Waxaan ku kalsoonahay tayada santuuqayaga TV-ga android waxaan rajeyneynaa inaan bixino dammaanad billo ah oo ah 12 iyo dammaanad lagu qanco oo ah 100%. Haddii, nasiibdarro, aad hesho khalad khaldan oo ah sanduuqa Android TV, ha ka labalabeyn inaad la xiriirto adeegga macaamiisheena waxaan kaa caawin doonaa inaad xalliso saacadaha 12.
Unbox iyo dib u 9.0 Android TV Box, Pendoo TX6 Android TV Box 4 3 Go Go DDR32 EMMC Dual WiFi + 2.4G 5G BT5.0 Bawdada Core 3D 4K Ultra HD H.265 USB3.0 Android TV Box
Tani waa qaan-qaabeyn sare oo Android ah oo loo dhisay Android 9.0 OS Quad ARM Cortex-A53 kernel. Nidaamka furfuran ee Android, apk weyn ayaa lagu rakibi karaa markii la doono. Kaliya maahan TV-ga Android, laakiin sidoo kale xarun madadaalo qoys. Ku raaxayso kumanaan kun oo ah 4K Ultra HD showyo iyo filimo! Qaabeynta sare: Nidaamka hawlgalka: processor-kii ugu dambeeyay ee 9.0 OS Android: Allwinner H6, ilaa 1,8 GHz, ARM Cortex-A53 quad-core GPU: Mali-T720 SDRAM: 4 Go LPDDR3 FLASH: 32 Go EMMC WiFi: Taken Xaraashka 2.4G + 5G IEEE 802.11 Dual WiFi b / g / n / acLAN Ethernet: RJ45 Ethernet Port (100 M) USB host: 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 Power Power: 5V / 2A DC Power LED (LED): Power: 3D Blue: Graphics Acceleration 3D Qalabka HD HD Taageerada: H.265, 4K 60pfs, USB3.0, HD2.0 Taageerada Xirfadeed: Iyadoo aan loo eegin dhibaatada la soo dersay sheygeena Pendoo, waxaad wali heli kartaa xalka Pendoo dhakhso leh oo xirfad leh. Adeegga Macaamiisha: Si loo bixiyo adeegga ugu wanaagsan ee suuragalka ah dhammaan macaamiisha, PENDOO waxay bixisaa adeegga macaamiisha 24h / 24. Wixii dhibaato ah, soo dhowow inaad nala soo xiriirto markaad xor tahay. Waxaan ku dadaali doonnaa intii karaankeena ah inaan xallino waxa aad quseyso oo aan kuu soo bandhigi karno xalka lagu shaqeyn karo. Xidhmada waxaa ka mid ah: 1 x TX6 9.0 1 5 Xulka TV-ga 2 x US Power Adapter (1V 1A) 1 x XNUMX X Xakameynta Fog Xakameedka x HDMI Cable XNUMX x Buugga Isticmaalaha
9.0 Android TV Box Android TV Box Pendoo TX6 4 3 DDR32 Go Go EMMC Dual WiFi + 2.4G 5G BT5.0 Bawdada Core 3D 4K Ultra HD H.265 USB3.0 Android TV Box
Fiidiyowga marka hore wuxuu u muuqday https://www.youtube.com/watch?v=NkZAjpc2k4k
Pangu 12 JAILBREAK for iOS 12.3.1 - 12.4 iyo 13.0 beta 3 shaqeeyey! - VIDEO
WAXYAABAHA: 28 WAXYAABAHA CAAFIMAAD EE QOYSKA LAGA HELO